Ndị na-eme ihe na-akpọ oku maka nchekwa nwa Afrika. – Igbo Services
Ndị na-eme ihe na-akpọ oku maka nchekwa nwa Afrika.
Isiokwu dị mkpaNaijiriaUncategorized
Ndị na-ahụ maka mmepe ụmụaka, agbaala ndị nne na nna na ndị nlekọta ume ka ha gbasie mbọ ike n’ichebe nwa Afrika ọ bụla site n’ịhụ na agụmakwụkwọ gbasara omume na-emerụ ahụ na mmegbu ndị nwere ike imebi ọdịmma ha ugbu a ma ọ bụ n’ọdịnihu.
Ndị otu ahụ kpọrọ oku a na mmemme iji mee emume ụbọchị mba ụwa nke ụmụ Afrịka nke afọ 2022, nke isiokwu ya bụ: Mwepụ omume ọjọọ na-emetụta ụmụaka, ọganihu na amụma na omume kemgbe 2013, nke e mere na Ibadan, isi obodo Oyo steeti.
Ihe omume nke otu otu mba ndị nta akụkọ ụmụ nwanyị (NAWOJ), Oyo State Council haziri, na mmekorita ya na otu ndị ọzọ, nwere ụmụakwụkwọ bịara, nne na nna, ndị nkuzi, otu na-abụghị nke gọọmentị, ndị na-eme amụma, ndị nnọchi anya gọọmentị, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na otu ndị ntorobịa, n’etiti. ndị ọzọ.
Na mmemme ahụ, Kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ, Sayensị na Nkà na ụzụ Oyo steeti bụ AbdulRahman Abdul Raheem kwara ụbọ akwara dị ka ndị nne na nna dị ka ihe nlereanya nye ụmụaka, na-ekwusi ike na mgbe ụmụaka nwere ezi nzụlite na ezi nzụlite, ha na-abanye n’ime ọha na eze ka ndị nnọchiteanya nke ọma. nke ezinụlọ na mmetụta dị mma na ọha mmadụ buru ibu.
Onye nkuzi ọbịa, Dr Kunle Awotiku, mere ka a mara ụfọdụ ihe ịma aka ụmụaka na-eche ihu, ọkachasị omume mkparị na-esiteghị na Iwu ikike ụmụaka, dị ka okwu ọnụ na nke mmụọ, nke na-egbochi ụmụaka ịbụ ndị kacha mma kwesịrị ịbụ ndị kacha mma. .
Ka ọ na-ekwusi okwu ike dị n’ihe egwu dị n’alụmdi na nwunye n’oge, igbu mmadụ na idina mmadụ n’ike, tinyere ndị ọzọ, Awotiku kwuputara na ekwesịrị ka etinye uche na mmekpa ahụ nke mmụọ nke ụmụaka na-eme, na-ekwu na a na-eji okwu ọnụ na-akpagbu ọtụtụ ụmụaka n’ụzọ mmụọ, ebe ọtụtụ ndị nne na nna amaghịdị ya.
O kwuru, sị: “Oge eruola ka anyị ghara ikwu okwu megide onwe anyị, ka anyị ghara imenye onwe anyị ihere, ghara ikwu na nwatakịrị adịghị mma n’ihi ihe ha na-enwe ma ọ bụ n’ihi na ha ebidola oge. Ọ bụrụ naanị na anyị nwere ike ịnakwere ihe ọ bụla anyị hụrụ site n’aka nwatakịrị, anyị na-aga n’ihu inweta ihe kacha mma n’aka ha. Ụfọdụ ndị nkụzi kparịrị m n’oge gara aga, ma ụfọdụ n’ime ndị nkụzi ahụ bụ ụmụ akwụkwọ m taa.”
Gọọmenti Kwara steeti enyela nde naira 150 maka ọrụ mmiri.
Onye ndụmọdụ omenala ndị China na-ekwu maka nri, omenala na Abuja.
“Nghọgbụ njem mbiri, mwakpo n’ọnọdu nhuju anya”, agba nke ikpeazu.
Onye na-abụ abụ oziọma na Naijiria bụ Mercy Chinwo bu onye ekwegoro nkwa alụmalụ.